Notsapainao ny fanentanana farany nataonao? | Martech Zone
Notsapainao ny fanentanana farany nataonao?
Zoma Janoary 7, 2011 Zoma, Martsa 1, 2013 Douglas Karr
Nahazo mailaka tsara tarehy aho avy amin'ny Best Buy Reward Zone androany. Ilay mailaka noforonina tsara dia nisy sary miavaka miaraka amin'ny tolotra mafonja. Tolotra iray nahasarika ny masoko dia ny Card SD 16Gb $ 24.99.
Notsindriako ilay rohy ary nasaina niditra aho. Nanandrana niditra aho ary tsy nahomby. Nizaha tranonkala 2 aho, nanandrana ny kaontiko ary ny adiresy mailaka… ary tsy afaka nanao famerenana teny miafina akory aho. Nitaraina tao amin'ny Twitter aho ary nanandrana nanampy ahy i @Coral_BestBuy. Nanazava izy fa tena niditra tao amin'ny Best Buy aho - fa tsy ny faritra valisoa, mitaky ahy hisoratra anarana amin'ny Best Buy na dia efa manana kaonty valisoa aza aho.
Ka nisoratra anarana aho. Amin'ny fotoana iray amin'ny fizotran'ny fisoratana anarana dia takiana amiko ny hiditra ny nomeraon-doka valisoa - toa mampifandray ireo kaonty roa ireo aho. Vantany vao natolotro izany dia namelombelona fotsiny ilay pejy niaraka tamin'ny isa nasongadina. Tsy misy hafatra diso. Tsy afaka nandroso na niverina tamin'ny tolotra tena izy aho. Nilavo lefona aho.
Ny ankamaroan'ny olona dia tokony ho efa nilavo lefona alohan'ny nataoko, saingy tiako ho hita ny fahasarotany. Ny tena olana eto dia ny mety ahazoan'ny ekipa mailaka valim-panentanana mahatsiravina amin'izao fotoana izao… na dia eo amin'ny tranokala aza no olana. Ny fangatahana olona iray handalo dingana marobe dia azo antoka fa hahasosotra ny mpanjifa rehetra.
Ny dingana fanampiny rehetra ao amin'ilay dingana dia handatsaka ny fiovam-ponao amin'ny 50%. Ataoko io isa io, saingy azoko antoka fa mbola ratsy kokoa aza ny tena isan-jato. Tokony homenao ny mpanjifanao làlana tsotra sy malina mankany amin'ny fiovam-po mba hampitomboana ny valin'ny fampielezan-kevitra. Mitaky fisoratana anarana, fisoratana anarana ao anaty rafitra 2, manakorontana ny mpampiasa…. izany rehetra izany dia mitarika mankany fandaozana sarety fiantsenana.
Rahoviana no fotoana farany nisoratanao anarana tamin'ny tranokalanao manokana ho an'ny demo, fampidinana, na koa fitsapana nanao fividianana? Miezaka ny manao izany isaky ny mahita aho ary mahita lesoka mahatsiravina foana. Raha ny marina, rehefa nandefa ilay mailaka opt-in aho dia nanana rohy fisoratana anarana tao amin'ny tranokalako izay nanondro ny pejy tsy mety! Ouch!
Tags: fanandramana fanentananamailakafitsapana mailakafitsapana
Fomba fanao tsara indrindra amin'ny fifandraisana efatra ho an'ny fanombohana teknika
Fandefasana mailaka miaraka amin'ny WordPress sy ny My Campaign Pro